Usoro Ọnọdụ - DataKit Studio
Weebụsaịtị a na-enye gị akụrụngwa ngwa ngwa mgbake ios data. Anyị na-eme ka ozi gị na ngwaahịa gị dị gị na weebụsaịtị a, dabere na usoro na ọnọdụ ndị a. Site na ị nweta weebụsaịtị a ị kwenyere na usoro ndị a. SafeKit Studio mee ikike icho niile ịgba akwụkwọ na iwu na hara nhatanha maka ihe ọ bụla mebiri nke usoro ndị a na ọnọdụ. Ikike nile enyeghị ọhere ozugbo ebe a ka edebere.
ios-data-recovery.com na-eji ihe nzuzo gị akpọrọ ihe. Anyị anaghị ekesara ndị ọzọ ozi nkeonwe. E nwere pụta ụwa ize ndụ na ojiji nke ọ bụla Software dị maka nbudata na Internet, na DataKit Studio ugbu adụ gị ọdụ, iji jide n'aka na ị na-ike ịghọta ihe niile nke ize ndụ tupu nbudata ọ bụla nke Software (gụnyere-enweghị mmachi, nwere ọrịa gị usoro site na nje kọmputa na ọnwụ nke data). Ọ bụ naanị gị na-ahụ maka nchekwa na nchekwa nke data na akụrụngwa ejiri jikọtara na Software a.
All logos, ikwommiri meziri, page nkụnye ndị eji isi mee, oyiyi na ndịna egosipụta na a na saịtị na-eje ozi akara, ụghalaahịa, na / ma ọ bụ ahia uwe (ịgụnye, "Marks") nke DataKit Studio ma ọ bụ ya na nke atọ ikikere .. Ewezuga expressly kwere n'ime ebe a, eji, Iṅomi, mgbasaozi, na-egosipụta, modifying ma ọ bụ na-ekesa ihe ọ bụla Marks n'ụdị ọ bụla ma ọ bụ ọlị enweghị awara awara e dere ikike nke DataKit Studio na-aju na ike emerụ nwebisiinka, edenyere, nzuzo ma ọ bụ iwu ndị ọzọ nke United States na / ma ọ bụ ndị ọzọ mba.
Ị na-ekweta na-agbachitere, indemnify ma jide DataKit Studio, ndị mmekọ ya na ndị isi ha, nduzi, mmadụ na ndị ọrụ na-adịghị njọ site na imegide ọ bụla na niile na-ekwu, losses, emebi, ụgwọ, na-akwụ ụgwọ mmefu, gụnyere ọkàiwu 'ụgwọ, ịda site ma ọ bụ yiri na ọdịnaya nke onye ọrụ gị, iji saịtị ahụ, ma ọ bụ mebie nke usoro ndị a.
Ọ bụla kwuru ma ọ bụ ihe zigara DataKit Studio, gụnyere na-enweghị mmachi nzaghachi, dị ka ajụjụ, na-ekwu, aro ma ọ bụ ọ bụla yiri ọmụma banyere Software, a website ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na ngwaahịa, mmemme ma ọ bụ ọrụ nke DataKit Studio ( "Nzaghachi"), ga-abụ e weere na-na-abụghị nzuzo. DataKit Studio ga-ọ dịghị ọrụ nke ụdị ọ bụla na-akwanyere ndị dị otú ahụ Nzaghachi na gābu free mụta nwa, ojiji, igosipụta, ngosi, ngosi, gbanwee, ike emepụta ọrụ ma kesaa Nzaghachi ka ndị ọzọ na-enweghị mmachi na gābu free iji ihe ọ bụla echiche , echiche, etu esi ma ọ bụ usoro dị otú ahụ Nzaghachi maka ihe ọ bụla nzube bụla, gụnyere ma na ọnweghị oke na-emepe emepe, n'ichepụta na ahịa ngwaahịa incorporating dị Nzaghachi.
Agbadoro ikike ọ bụla nke ozi dị n'ime nke a ga-etinyerịrị nkwupụta nwebisiinka, ụghalaahịa ma ọ bụ akụkọ mgbe ochie nke DataKit Studio, na akwụkwọ ọ bụla ị mere. Akwụkwọ ikike maka sọftụwia na ojiji nke weebụsaịtị a bụ iwu nke United States.
Ndi nwebisiinka na websaịtị a (ghari na ejighi oke, ederede, onyonyo, akara ngosi, olu, na ngwanro) nwebisi na ikikere nke DataKit Studio. All ihe ẹdude a na saịtị na-echebe site United States na mba na nwebisiinka iwu na ghara-depụtaghachiri, aruputaghari, ekesa, ebute site ná, na egosiri, bipụtara na-emegharị, ma ọ bụ mesoo n'ụdị ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla n'aka ma ọ bụ na ihe ọ bụla media enweghị tupu e dere ikike nke DataKit Studio. Maynwere ike ịgbanwe ma ọ bụ wepu ihe ọ bụla nwebisiinka ma ọ bụ ọkwa ọ bụla ọzọ site na mbipụta ọdịnaya ahụ.